Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo baaq u diray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo baaq u diray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif (SAWIRO)
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha maamulka Galmudug oo maalintii shalay ka qeyb-galay doorashadii maamulka Hirshabeele oo ka dhacday magaalada Jowhar ayaa maanta dib ugu laabatay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo safarkiisa ay ku weheliyaan xubnaha Galmudug u matalaya Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa baaq culus u diray Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Wuxuu madaxweyne Guuleed ugu baaqay Ugaas Xasan inuu taageero maamulka Hirshabeele oo doorashadiisa ay shalay ka dhacday magaalada Jowhar islamarkaana uu garab istaago, maadaama uu shacabka Soomaaliyeed dhexdeeda qiimo weyn ku leeyahay.
“Ugaas Xasan waxaan ogahay inuu yahay Ugaaska ugu faca-weyn Ugaasyada Soomaaliyeed ahna nin aad u qiimo badan, waxaa maantana looga baahan yahay inuu taageero maamulkaas islamarkaana laga shaqeeyo midnimada shacabka labada gobolka ee Hiiraan iyo Sh/dhexe” Sidaasi waxaa yiri madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Hadalka madaxweyne Guuleed ayaa u muuqda mid uu baaq culus ugu diraayo Ugaaska beesha Xawaadle, maadaama uu yahay Ugaaska kaliya ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo haatan mucaaradsan maamulka Hirshabeele.
Si kastaba ha ahaatee, baaqaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa imaanaya xilli Ugaaska beesha Xawaadle uu dhawaan shaaciyay in wax Hirshabeele la yiraahdo aysan jirin islamarkaana gobolka Hiiraan kaliya loo dhisi doonno maamul u gaar ah gobolkaas.